Dowladda Imaaraadka oo dacwo rasmi ah ka gudbisay Tvga Aljazeera. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dowladda Imaaraadka oo dacwo rasmi ah ka gudbisay Tvga Aljazeera.
On Jul 13, 2017 230 0
Tvga Aljazeera oo kamid ah tvyada ugu caansan caalamka ayaa wajahaya xamlo uga imaaneysa qaar kamid ah dowladaha carabta oo ay ugu tun weyntahay dowladda Imaaraadka Carabta.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dacwo toos ah waxay u gudbisay Qaramada Midoobay oo ah hay’adda ugu sarreysay ee dowladaha caalamka ay ka dambeeyaan, islamarkaana ay maamusho dowladda Maraykanka.
Wasiirka arimaha dibadda dowladda Imaaraadka ayaa sheegay in dacwada ay ka gudbiyeen tvga Aljazeera ay salka ku heysa iyadooo Tvgu taageero Xagjirnimada iyo Argagaxisada waxa loogu yeero oo loola jeedo Mujaahidiinta.
Aljazeera ayaa dhowr jeer beenisay eedeymaha loo soo jeediyay, waxaana Tvgan oo ay leedahay dowladda Qadar isaga iyo dowladiisaba wajahayaan cunaqabateyn dhaqaale oo ay kusoo rogeen afar dowladood oo kala ah Masar, Aala-Sucuud, Baxreyn iyo Imaaraadka Carabta.
Dhawaan ayaa warqad ay dowladahas usoo direen dowladda Qadar si looga qaado cunaqabateynta waxay qodobadii ay soo gudbiyeen ku dareen in la xiro Tvga Aljazeera, waxaana dalabkaas aad uga horyimid Qaramada Midoobay iyo hay’ada sheegta xuquuqda Insaanka.